डीएसपी राईको ठाउँमा चन्दलाई खटाइयो, सक्षम कि असक्षम ? | Citizen Post News
डीएसपी राईको ठाउँमा चन्दलाई खटाइयो, सक्षम कि असक्षम ?
२०७५ असोज २२ गते १९:४७
काठमाडौं । गत विहिबार महानगरीय प्रहरी बृत्त बौंद्धका डीएसपी श्यामकुमार राईका लागि जीवनकै खराब दिन बन्यो । विहिबार नै त्यो दिन थियो जुन दिन राइले गरेका अवैध क्रियाकलाप र घुसखोरीबारे एकैपटक सीपोष्ट न्यूज डटकमसहित विभिन्न अनलाइन र पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । सीपोष्ट न्यूज डटकममा प्रकाशिन समाचारमा उनले राति ९ बजेपछि अवैध धन्दावालालाई कार्यालयमै बोलाएर रकम लिने गरेको खुलसा गरिएको थियो ।
त्यति मात्र नभई उनकै संरक्षण सञ्चालित चार वटा भीआइपी जुवा अखडाबाट मासिक ५० हजार रुपैयाँ लिने गरेको किटानी गरिएको थियो । जुन अखडामध्ये काठमाडौं परिसरले मुलपानीस्थित छापा मारोको एक थियो । आफ्नो क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिलाई आखा चिम्लिएका कारण मात्र होइन, महिनावारी रकम नै उठाउन थालेपछि उनको बदनामी चुलिएको थियो ।
उनले बौंद्ध बृत्तका प्रहरी प्रमुख भएर आउने जुवा, तास, क्रसर, बालुवा, डान्स, दोहरी, रिर्सोट, तिब्बतियन माजोङ, बेश्यावृत्ति गर्ने अखडाबाट महिनावारी उठाउन थालेको थिए । समाजलाई नै असर गर्ने आपराधिक गतिविधि र अवैध कामलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उनले त्यस्ता अखडाबाट रकम असुल्न थालेको भन्दै उनीमातहत प्रहरीमै चरम असन्तुष्टि छाएको थियो । उनका कर्तुतका बारेमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सतर्क हुनुको सट्टा दुर्भाग्य उनले फेरि पनि कार्यालयमा बोलाउँदै रकम उठाउन थाले । उनलाई शुक्रबार रातिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयमै पुगेर रंगेहात एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गर्यो ।
सायद डीएसपी राईका लागि यो भन्दा खराब दिन अन्य कुनै भएन होला । प्रहरी मुख्यालयले अहिले राईको ठाउँमा डीएसपी नरेन्द चन्दलाई पठाएको छ । अब उनको मुख्य चुनौती भन्नु नै राईले चलाएको अवैध असुली धन्दालाई रोक्नु मात्र नभई आफ्नो क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलाप बन्द गराउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु रहेको छ । यो काममा उनी कतिको सक्षम सावित होलान ? त्यो भविश्यले नै बताउला । साथै प्रहरी मुख्यालयले थानकोट बृत्तमा डीएसपी कुमारविक्रम थापा र सातदोबाटो बृत्तमा डीएसपी गौतम मिश्रलाई पठाएको छ ।